5 Best Christmas Markets Na Germany | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Christmas Markets Na Germany
Ị pụrụ ikwere ya fọrọ nke nta na oge nke afọ ọzọ? Ọ bụ ihe ndị kasị mma oge nke afọ! N'ezie n'ime mmụọ na Best Christmas Markets na Germany! Site na mbubreyo November ruo mgbe Christmas Eve, obodo n'ámá nile Germany na-buzzing na Christmas ahịa. Dị ka otu n'ime ndị kasị oké ọnụ ahịa omenala na Deutschland (Germany na German), nnukwu obodo na obere obodo myiri usọrọ biakwa obibia oge. Ya mere jidere a na-ekpo ọkụ Foto Ụlọ Nga nke gluhwein na jikere nche chestnuts amịkpọ na ihe na-emeghe ọkụ a gaghị agbaghara ezumike ntụ ọkụ.
1. Frankfurt Romerberg Na St. Pauls Square Christmas Market
Nke a bụ ihe Best Christmas Markets na Germany na nrọ na-mere nke. Izere ỤZỤ nke Frankfurt n'ime obodo Old Town, nke atụgharịa n'ime a Christmas dreamland n'oge Krismas. Romerberg na St. Pauls square mee nke ọmarịcha ọkara osisi wuo ụlọ. Ha na-jupụtara na osisi huts kpuchie ọkụ, ịchọ mma, na wreaths. Ike n'aka ghara uche na-ewu ewu pealing nke hey, a Christmas Eve omenala na nke ụka hey nke Old Town iba ke kwekọrọ ofụri district maka akakan egwu ahụmahụ.
A nta omume karịa Frankfurt, ma dị nnọọ ka kpokọtara! Nke a bụ a obere obodo ọkụkọ n'ime ugwu tinyere Belgium ókè. Monschau n'ezie na-abịa ndụ na Christmas oge na Best Christmas Markets na Germany.
The obodo Christmas decorations nwere pụtara ịbụ na-ewu ewu na ndị obodo meghere a n'afọ House of Christmas. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị dị ka Christmas, mgbe nke a bụ maa bụghị ebe ndụ! A ụbọchị njem si Cologne ma ọ bụ Düsseldorf, gaa na-ekiri ndị obodo ìhè ná mgbede mgbe nibbling na ha mpaghara Monschauer Dutchen spongecake na sipping mulled mmanya tupu ị laghachi n'obodo. Na ya cobblestone n'okporo ámá, snow topped ọkara osisi ụlọ, na asọfe iyi ọ bụ ihe ọ bụla na mkpirisi nke idyllic.
Nke a bụ maa otu n'ime Europe kasị mara mma ochie obodo. Ọ bụ otú ọmarịcha ọ ese ihe dị ka a nkiri set. Nke a bụ eziokwu karịsịa na Christmas oge na esinam mba ụfọdụ nke Best Christmas Markets na Germany.
The silhouette nke ọnụ ụzọ ámá na-agbachitere elu egosi AURA nke a akụkọ ifo. Dị ka unu na-abanye site na otu nke ochie ụzọ ámá, ị ga-ozugbo obi iru ala n'ime oge na-asọpụrụ mgbidi a ihunanya ebe. Rothenburg enchantment ebuliwo na n'oge gara aga 1,000 afọ, ọ nọgidewo na igba ya ọgwụ na na mba ọbịa.
Ebe ọ bụ na narị afọ nke 15, a magburu onwe Christmas ahịa ka mgbe niile a atụmatụ nke festive Christmas oge. Nke a ahịa pụrụ ileghachi anya azụ na a 500 afọ omenala, na ebe ọ bụ na nke a oge ọ na-eji amamihe gbanwere nnọọ nta site ya akụkọ si malite. Ọtụtụ omenala ihe na-enwe na njikọ na nke a ahịa. The isi nke ahịa, Otú ọ dị, bụ ọdịdị nke Rothenburg agba, onye nyekwara a ahịa aha ya. The akụkọ ihe mere eme si malite agba na-abịa anyị si inyoghi inyoghi na anya gara aga. Nna nna anyị hà kweere na ha bụ ndị ozi si n'ụwa ọzọ, onye-ese site na mbara igwe na mkpụrụ obi nke ndị nwụrụ anwụ n'oge oyi. Ma oyiyi nke a mythical agwa agbanweela kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ebe onye na-eji na-ama jijiji na-atụ egwu n'ihu a eerie ọgụgụ, taa, eto eto na ndị agadi na-atụ anya ya laghachiri. The ọhịa ịnyịnya aghọwo a friendly ozi.
The eze Munich Christmas Markets na otu onye nke Best Christmas Markets na Germany. Nke a Christkindlmarkt pụrụ ịchọta Marienplatz, Munich isi square, na-atọ ụtọ ụlọ awụfu n'ime nso shopping n'okporo ámá dị ka nke ọma.
N'ihi na nke etiti ebe ke Munich Old Town, nke a bụ nke kasị nnọọ touristy na mmadụ jupụtara na ahịa, ma ọ bụ na-ewu ewu maka a mere: uloanumaanu mgbe uloanumaanu nke omenala ejiri mee crafts, ụtọ snacks ka ike zụta na niile kwa ihunanya backdrop nke Neues Rathaus. Jide n'aka na-ọbọgwụ n'ime n'ogige nke Rathaus ịhụ ndị ọzọ ụlọ na Christkindl post office, ebe ị nwere ike nweta a pụrụ iche Christkindl stampụ gị postkaadị / akwụkwọ ozi.
PS: Iji nweta ihe mmezi kpokọtara anya, ike n'aka ịrị elu St Peters Church Tower mgbe anyanwụ dasịrị kwa!
The Nuremberg Christkindlesmarkt, ma ọ bụ Nuremberg Christmas Market, bụ achọghị ịzụ Germanys kasị ama Christmas ahịa. The Christmas ahịa na Nurembergs Main Market Square ike deere azụ akwụkwọ mbụ banyere ya na afọ 1628, ma Nurembergers kwere ya ụbọchị laghachi ọbụna n'ihu.
Idebe ọdịnala dị mkpa, na ọtụtụ ndị ụlọ na-ere ngwá ahịa ha na-ere ihe na-niile mere regionally. Ọbụna osisi ụlọ onwe ha na-mere nke regionally ndụ spruce!
Ị ga-ahụ 180 osisi huts ere ihe niile si omenala akwacha Men na icho mma Nurembergers ụlọ n'oge Krismas na Original Nuremberger na ike na-aha dị ka ndị dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ha na-emepụta n'ime obodo ókè na itu kpomkwem 23 grams.
Njikere na-eche na ime anwansi nke Christmas site na ịga na Best Christmas Markets na Germany? Mgbe ahụ isi na n'elu Save A Train na akwụkwọ a tiketi nkeji!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Christmas Markets Na Germany” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F%3Flang%3Dig – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)